XOG: Madaxweyne Guulled Itoobiya Muxuu kala soo hadlay Muxuuse ka yiri Dhibaatada Ciidamada Liyuu Boolis – Kismaayo24 News Agency
by admin 22nd April 2016 040
Madaxweynaha Galmudug State Cabdi Kariim xuseen Guulled oo dhawaanahan safar dalka dibaddiisa ugu manaay ayaa maanta Muqdisho so gaaray isagoona ka war bixiyay safaro uu ku tagay dalalka Talyaaniga iyo Itoobiya.
Madaxweyne Guulled waxaa uu sheegay in Dalka Itoobiya uu mudo 2 Cisho ah ku sugnaay isagoona halkaasi kulamo kula qaatay masuuliyiinta dalkaasi oo uu kala hadlay Arima dhowr ah oo ay ka mid tahay Amniga deegaanada Xuduuda labada dal gaar ahaan xududa ay wadaan gobolka galgaduud iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Waxaa u sidoo kale ka hadlay Dhibaatada Ciidamada Liyuu Boolis ay ku haayan Shacabka ku Nool deegaanada Galmudug .
Madaxweynaha waxaa uu intaasi ku daray in shacabka ku nool deegaanka Docoley oo ka tirsan gobolka Galgaduud ay ciidamada Liyuu boolis ku eedeeyeen in ay gudaha u soo galeen magaalada oo dad shacab ah ay ka barakiciyeen.
DEG DEG: Ciidamada NISA oo gacanta ku dhigay Gaari waxyaabaha Qarxa laga soo Buuxiyay oo la doonayay in lagau qarxiyo Maqaaxi ku taala…
WAR CUSUB: In kabadan boqol iyo todobaatan Dal oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa lagu wadaa in ay galinka dambe ee maanta saxiixaan heshiis cusub oo looga gol leeyahay in lagula dagaalamo isbadalka cimilada adduunka.
DEG DEG: Xiisad dagaal oo u dhaxeeya maleeshiyaad kasoo kala jeeda puntland iyo galmudug oo ka taagan …..
Xog: Akhriso sida Beelaha Soomaaliyeed u kala helayaan Baarlamaanka hadii lagu soo xulo Nidaamka Degmooyinka.